ढल्यो एउटा बलियो खम्बा : आर्यघाटमा कलाकारहरुको चल्यो रुवाबासी (भिडियो) « गोर्खाली खबर डटकम
कपाल लामो, बाक्लो र सिल्की बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय प्रयोग गर्नुहोस्
महानायक राजेश हमालको भाइरल तस्बिरहरु हेर्नुहोस (फोटो फिचर)
गायक राम कृष्ण ढकालको मनका कुरा सार्वजनिक (भिडियो)
Sambandha Ma Sanka | सम्बन्धमा शंका New Song 2077
ढल्यो एउटा बलियो खम्बा : आर्यघाटमा कलाकारहरुको चल्यो रुवाबासी (भिडियो)
काठमाडौँ – लोकगायक रत्न बानियाँको निधन भएको छ । लामो समयदेखि लोकदोहोरी क्षेत्रमा बानियाँको ५८ वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएको हो । मिर्गौला फेल भएपछि डायलासिस गराउँदै आएका बानियाको ओम अस्पतालमा निधन भएको हो ।
सुगर तथा प्रेसरको बिरामी समेत रहेका उनलाई स्वास्थ्यमा असहज भएपछि मंगलबार अस्पताल लगिएको थियो । स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोलामा जन्मिएका गायक बानियाँ लामो समयदेखि लोकदोहोरी क्षेत्रमा सक्रिय थिए । बानियाँका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
उनका ‘जिन्दगी के छ र’, ‘मनको वेदना’, ‘पोखरा फेवाताल’ लगायतका अन्य थुप्रै लोकगीत चर्चित छन् । रोइला, सालैजो तथा भजन संग्रह समेत ल्याएका बानियाँ झरना संगीत रेकर्डिङ स्टुडियोका संचालक समेत हुन् ।
लोकदोहोरी गायिका राधिका हमालले धेरै नयाँ कलाकारहरु बानियाँको सहयोगमा स्थापित भएको बताइन् । आफू स्वयंमलाई पनि पहिलो गीतमा बानियाँले नै लगानी गरिदिएको उनको भनाई छ ।बिरामी भएपछि बानियाँले माछापोखरीमा रहेको घर समेत बेचेका थिए ।
मिर्गौला फेल भएपछि लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरुले पनि उनको उपचारमा सहयोग गरेका थिए । उनको निधनले नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षती पुगेका राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विजीले बताए ।
गायक बानियाँको निधनमा लोकदोहोरी क्षेत्रका धेरै कलाकारहरुले दुःख ब्यक्त गरेका छन् । लोक गायन क्षेत्रमा वर्षौदेखि सक्रिय उनको निधनमा नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, विभिन्न कलाकारहरुले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धान्जली दिइरहेका छन् ।
पशुपती नाथलाई सुनको जलहरी वि,वाद किन ? राजाले चादिको जलहरी प्रधानमन्त्रीले सुनकै किन ? (भिडियो सहित)
लामो समयपछि फेरि जम्मेर आए ७० वर्षे वृद्ध बुढा र २० वर्षे बुढी(भिडियो हेर्नुस)
बाईक चेकिङमा सवारीकर्ताको चाँबी खोसेर निधारमा घुसाइदिएपछि…